ဥရောပ, ဘုန်းနှင့်ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ၏လှပသောမြေယာခြောများအတွက်ဦးတည်ရာမှတစ်ဦးသွားလာရင်းဖြစ်ပါသည် နေ့စဉ်ခရီးသွားအဲဒီမှာအထဲကစိတ်အားထက်သန်. အဆမဲ့ကွောကျရှံ့အလည်အပတ်ခရီးနေရာနိုးထမှုနှင့်အတူ, ဥရောပဖြစ်ပါသည် ပြည်ပမှာလှပတဦးဖြစ်လူသိများ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်လေ့လာမှုအချက်အချာ အဖြစ်ကမ်းခြေတစ်ခု uncountable ကျေးဇူးရှိ, ကျွန်းများ, ဘုံဗိမာန်, ရဲတိုက်, နှင့်သမိုင်းအထိမ်းအမှတ.
Salzburg ဂျာမဏီ၏နယ်စပ်တွင်တည်ရှိသည်, သြစတြီးယားနဲ့ကားများ၏နိုင်ငံတွင်းရှိ အမှန်မျက်စိတစ်မျက်မှောက်သောကြီးမားအရှေ့အဲလ်ပ်တောင်တန်းတို့က cuddled. ဤ အံ့ဘွယ်သောနှင့်အငယျဆုံးသော Known လှပသောခရီးဆုံးများအာလုံးမြို့မိုဇတ်၏မွေးရပ်မြေဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါကျော်ကြားတဲ့ဂီတတေးရေးဆရာ, အဘယ်သူ၏
တစ်ခေတ်နောက်ကျမြို့တစ်ချိန်ကဘာ, Constanta လက်ရှိရိုမေးနီးယားတတိယအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါသည် မြို့နှင့်ဥရောပတိုက်တွင်အခြားအပြောင်သဘောကိုထငျရှားစတင့်တယ်ဦးတည်ရာနေရာများနှင့်ပင်လယ်နက်၏အနောက်ဘက်ကမ်းတွင်တည်ရှိပြီးနေတဲ့ဆူညံဆိပ်ကမ်း.
Constanta မြောက်မြားစွာသက်သေမှနေရာဖြစ်သည် ခရီးသွားဧည့်ဟော့စပေါ့ ဆယ်ဘို့တဘို့ကိုပြန်မယ့် ရာစု, အဆိုပါ Ovid ရင်ပြင်အပါအဝင်, ရောမအနုပညာရှင်၏ရှိရာကြေးဝါရုပ်တု Ovid ရပ်တည်ချက်, နှင့် relinquished Constanta ကာစီနို, အရာအနုပညာများ၏ဗိသုကာ features Noveau. Constanta ထိုနည်းတူဖြစ်ကောင်းအများဆုံးကြည်နူးဖွယ်သမုဒ္ဒရာရှိပါတယ်, ဘယ်မှာသင်လိမ့်မည် နေပူထဲမှအခွင့်အလမ်းရဖို့နဲ့တက်လျှော့ပေးရေး. အမှု၌သင်တို့တစ်ဦးစွန့်စား၌ရှိကြ၏ စိတ်နေသဘောထား, ရှိပါတယ် ပေါင်းစုံနေ့ကခရီးစဉ် Constanta ထံမှ, နှစ်ခုသွားရောက်ခြင်းများပါဝင်သည်အရာ ယူနက်စကိုအမွေအနှစ်ဆိုဒ်များ တစ်ဦးမှာအဆုံးဆီသို့ဦးတည်လျှော့ပေါ့နှင့်အတူအမည်ရညုနှင့် Tulcea နာမည်ကျော်ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်း, Mangalia.
တူသောအပေါငျးတို့သပိုပြီးသိသာဘယ်လ်ဂျီယံမြို့ပြလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့အရိပ်အောက်မှာ Hidden Antwerp နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်, ဂျန့်မြို့မှာဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်ဖြစ်ပါသည်. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မြို့များနှင့် ဝေးလျော့နည်းရောဂါ, ဂျန့်မြို့မှာသင်သည်သက်သာခံစားရစေရန်လုံလောက်အနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံတက်မြိန်မှကြီးမားအလုံအလောက်. သငျသညျတော်တော်လေးပြတိုက်၏ဝါသနာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ခေတ်မှီဘား, နှင့်တူးမြောင်းဘက်အမြင်များ, သငျသညျကျိန်းသေသင့်ရဲ့ခရီးသွားမှဂျန့်မြို့မှာထည့်သွင်းဖို့လိုပေမည် ခရီးစဉ်. လျစ်လျူရှုခံရဖို့မပေးအပ်သောသောနေရာများကိုတစ်ဦးသောအဘို့ကို Gravensteen ပါဝင်သည်, တူးမြောင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်အမြင်များနှင့်အတူဆယ်ဘို့တဘို့ရာစုအိမ်ကြီး, ဂျန့်မြို့မှာနှင့်များ၏ Belfry စိန့် Baroness ဘုရားရှိခိုးကျောင်း.
ယင်း၏အစဉ်မပြတ်နေစဉ်အတွင်းဟယ်လ်စင်ကီသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့စဉ်းစားပါ နွေရာသီရက်ပေါင်း အဲဒီမှာသင်၏အချိန်မြှင့်တင်ရန် သို့မဟုတ်သင့် gutsy ဘွတ်ဖိနပ်ပေါ်တွင်တင်နှင့်စောင်ကိုဆောင်းတွင်းညနေခင်းကိုစစ်တိုက်ခြင်း. ဘယ်ကိစ္စမဆို, ကြည့်ဖို့မြင်ကွင်းများ၏ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားနံပါတ်များရှိပါတယ်, သငျသညျထို option ရှိသည်မည်မဟုတ် လုံးဝကရရှိထားသူတိုင်းလျှို့ဝှက်ချက်ထုတ်ဖေါ်!
ဂို, ဆွီဒင်တွင်တည်ရှိသည်, Liseberg အပန်းဖြေပန်းခြံမှနေရာဖြစ်သည်, မှတစ်ခုဖြစ်သော တညျးဟူသော Known လှပသောခရီးဆုံးများအာလုံး၏တဦးတည်းဖြစ်ခြင်းဆိုသော်ငြားထိုလူမျိုးထဲတွင်ထိပ်ဆုံးဆွဲဆောင်မှု. ဒါဟာအစဖြစ်သောတိုင်းပြည်အတွင်းဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်၏ မြေနှင့်ပင်လယ်နှစ်ခုလုံး၏၎င်း၏နိုင်အောင်နှင့်၎င်း၏မတူကွဲပြားကြောင့် amusing ကျော်လွန် "Fika" ကဲ့သို့သဘောတရားများ (ကော်ဖီလပ်ချိန်ခံစားတဲ့ Concept ကို) နှင့် Feskekorka (ငါး ဘုရားရှိခိုးကြောငျး) သူတို့ရဲ့အံ့သြဖွယ်ဂီတပွဲတော်သက်သေခံရန်သြဂုတ်လအတွင်းကဤမြို့ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ကြိုးစားပါ Way ကိုအထဲကအနောက်အဖြစ်လူသိများ. ဤအချိန်ကာလအတွင်းသွားရောက်မဖြစ်နိုင်ပါ? အဆိုပါမြို့အလိုတော် သို့ရာတွင်လှပတဲ့ရှုခင်းတွေနဲ့အားလုံးသင့်ရဲ့အာရုံတစ်ခုအပျြောအပါးအဖြစ်ရှိုး,
Split ကိုခရိုအေးရှားဖြစ်ပါသည်သင်ကဖွများအတွက်အမဲလိုက်ခြင်းအပေါ်လျှင်တစ်ဦးအားလပ်ရက်များအတွက်စုံလင်သောအပြောင် Known လှပသောခရီးဆုံးများအာလုံးဖြစ်ပါသည် Chilling မြေထဲ Vibe နှင့်အတူကမ်းရိုးတန်းမြို့စပ်လျဉ်း. ဒီမှာ Dalmatian အဘိဓါန်အစားအစာ ယင်းနှင့်အတူ coupled လတ်ဆတ်တဲ့ပင်လယ်စာ သင့်ရဲ့အာရုံခြော့နှင့်သင့်ဒူး ထောက်. ပေါ်တွင်သင်ရလိမ့်မယ်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/lesser-known-beautiful-destinations/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)